A iphupho lapho Uzibona sintanta pool, umemezela ushintsho okuseduze ubuhlobo bakho nomngane wakho abangakwazi angene romance ngesivunguvungu. Indlela cwilisa amanzi echibi kuzodluliselwa ekuphileni kwangempela, futhi ngeke eziphonsa baphulukundlela bangena imizwa entsha uthando. Kuyoba kubonakale sengathi ukuphila kwakho kwenzeke izenzakalo ezibaluleke kakhulu. Kodwa iphupho nge pool Abahlaziyi njengabangane isixwayiso, athwala ulwazi mayelana ngobufushane nobuhlobo obusha, transience yabo. Qonda lokho ichibi iphupho, ungakwazi, uma uqhubeka ngokucophelela ithrekhi yonke simo okulala. Udinga ukwazi ukuthi ivelaphi, ukuhlaziya imizwa yabo ngesikhathi sokulala futhi okwamanje uphaphame.
Pool noma ngaphandle kwamanzi - it is a ehlukile ukuzihlanganisa emjikelezweni jikelele ukuphila yakho esikhaleni somuntu siqu. Ngakho-ke, ecabanga iphupho, udinga ukwazi ukuthi liqukethe ulwazi mayelana ubuhlobo bakho nabantu osebenza nabo noma abathandekayo. Pool noma ubhavu - yindawo lapho sithatha ukwelashwa amanzi, ukuhlambulula wageza umzimba wakhe. Ukwemukelwa lezo zinqubo ngokuvamile eyenziwa nge okungenani izingubo, indoda livela amaphupho ngendlela engavikelekile. Kuyinto evulekile, futhi ngenxa yalokho sengozini.
Sengozini umzimba wakho umphefumulo kumbuthano ezithile zomphakathi kufanele ukukuxwayisa. Ekuphileni okungokoqobo, kungcono ukuba angaweli esicuphweni Esimweni esinjalo, okusho ukuthi isexwayiso sakho sokulala futhi idinga ukuthi icabanga ngokuphila izimo kanye nokuqonda ukuthi ichibi iphupho. Noma yimuphi iphupho okuthwala ngawe ulwazi oludingekayo ukuthi ingasetshenziswa ukuhlaziya zokuphila esidlule futhi wenze izinhlelo ngekusasa.
Engenalutho yokubhukuda, iphupho mayelana nokuthi iziphi izinhlelo ungabona - isikhala acabanga ukuthi kungaba axazulule umphefumulo wakho engenabantu ngemva kwekhefu nge intandokazi umuntu. nakho lakho kulesi simo futhi ukudideka yakho akukuniki ikhono soberly ukuhlola isimo. Impilo yakho iye ogxile ngokuphelele oyedwa. Mhlawumbe simthande yakho futhi uthando olukhulu baba imbangela discontinuity sigameko. Zama ukubheka isimo ngaphesheya, ahlaziye futhi sifinyelele eziphethweni, ngoba wena ufanelwe okungcono kakhulu ubuhlobo bakho.
Ukugeza iphupho entombazaneni engashadile uthembisa okusheshayo amaziyo ezithakazelisayo nale nsizwa. Lo muntu owayekwazi enhle wakhe bese ufaka umbuthano yokuxhumana yayo.
Uma ngesikhathi sokulala owawunalo ukubhukuda echibini kungekho izingubo ku-ke ngokushesha Nina, ngeke ningene ubuhlobo obuseduze ukuthi kungonakalisa ubuhlobo bakho nabanye, ukuphazamisa isigqi wokuphila. Uma ukubhukuda echibini e iqembu nqunu izinsizwa, kusho ukuthi kuzodingeka inqwaba abalandeli.
Uma amanzi echibini ehlanzekile, khona-ke impilo yakho ayiyona inkimbinkimbi izenzo abantu okungagunyaziwe, futhi sikufisela inhlanhla kuxhomeke kuwe. Uma ichibi ligcwele amanzi anodaka, ke empilweni uzothola isithiyo ukuthi awukwazi ngempela, hlaziya isimo. Ukwazi lokho ichibi iphupho amanzi anodaka, ungakwazi kukuvikele izenzo ezingalungile empilweni.
A iphupho lapho aqala ukucwila, kuyinto amashwa kusondela noma ukugula. Diving lifanekisela umzabalazo ukuphila, ukusinda. Ngenhla leliphupho kuyafaneleka ukucabangela, ngoba uma une ukulwa esikhathini esizayo, kungcono ukulungiselela kusengaphambili.
Ukuze baphupha i-swimming pool, okuyinto lenqwaba abantu okusho ukuthi ubumfihlo bakho ihlaselwe bangaphandle, eziningi inkulumo mayelana kuwe, ungonakalisa idumela lakho ngoba awunawo isikhala esisele. A iphupho lapho ukubhukuda echibini nabangani noma nezintombi, futhi ngesikhathi esifanayo uzizwe ukhululekile futhi ukhululekile, ukuthembisa iphromoshini ukwenza liyindawo efanelekayo umphakathi. Okwakushiwo ubuthongo futhi akazi ukuthi ichibi iphupho, lingeze leza ngokushesha, kodwa ngemva kwenkathi ethile yesikhathi uma ukuphila kwakho zizoqala ukuguquka, futhi uzokwazi ukuqhathanisa lokho ayekubona yamaphupho akhe langenxa empilweni yangempela.
Kungani dream of a dinosaur? Ukuhunyushwa embonweni wasebusuku
Negesi Welding futhi isebenza umkhuba.